प्रचण्ड-अोलीको सम्बन्ध चिस्याउन को-को छन् सक्रिय ? किन टाढिदैंछ वाम एकता ? | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more प्रचण्ड-अोलीको सम्बन्ध चिस्याउन को-को छन् सक्रिय ? किन टाढिदैंछ वाम एकता ?
प्रचण्ड-अोलीको सम्बन्ध चिस्याउन को-को छन् सक्रिय ? किन टाढिदैंछ वाम एकता ?
माघ १२ गते, २०७४ - १३:५७
काठमाडाैं । नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीचको पार्टी एकता चुनाव लगत्तै होला भन्ने कतिपयलाई लागेको थियो । त्यसपछि विभिन्न राजनीतिक घटनाक्रमले एकता प्रक्रिया लम्बियो, जसलाई स्वभाविक मान्न सकिन्छ ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली उपचारका लागि विदेश गएपछि केही दिनका लागि राम्रै बाहाना मिल्यो । ओली विदेश भइन्जेल एमाले र माओवादीका नेताहरुले भनेका थिए, “ओली फर्किएपछि एकता प्रक्रियाले गति लिन्छ ।”
तर त्यस्तो नतिजा केही देखिएको छैन । ओली र माअोवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच अझै कुरा मिल्न नसकेको संकेत स्पष्ट छ । विशेषगरी पदीय भागबण्डामै कुरो अड्किएको आशंका पनि धेरैको छ ।
चुनावी गठबन्धनपछि ओली र प्रचण्डचिको सम्बन्ध राम्रो त भएको छ, तर ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन माओवादी तयार भइसक्दा पनि एमाले भने प्रचण्डलाई अध्यक्ष बनाउनुपर्छ भन्ने अवस्थामा पुग्न सकेको छैन ।
चुनावपछि सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनेकाले ओली स्वभाविक रुपमा प्रधानमन्त्रीका दाबेदार हुन्, जसलाई जनताले पनि स्विकार गरिसकेका छन् । तर प्रचण्डलाई अध्यक्ष बनाउने र नबनाउनेमा सबै एकमत हुन सकेका छैनन् ।
एमालेले भने दलीय हैसियतका आधारमा ओली नै अध्यक्ष पनि प्रधानमन्त्री पनि बन्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा छन् । त्यस्तै माओवादीका नेताहरु प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष एक दिनुपर्ने लाइनमा छन् । खासगरि माअोवादी नेतादेखि कार्यकर्तासम्मले सामाजिक सञ्जालमा अात्मसमर्पण होइन एकता गर्न खोजेका हाैं भन्ने पोष्ट गरिरहेका छन् । तर एमालेका केहि भने माअोवादी एमालेसँग अात्मसमर्पण गर्न खोजेको भन्ने प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् । तर माअोवादीका नेताहरू एमालेका त्यस्तो अभिव्यक्ति मान्न पट्टकै तयार छैनन् । माअोवादीका एक नेताकाअनुसार प्रचण्डलाइ अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्रीमध्ये एक पद नदिए पार्टी एकताको बिषय दुर रहेको बताउँछन् ।
प्रचण्डलाई ओलीपछिको हैसियत दिएर महाधिबेसनमा जानुपर्ने एमालेको ठहर जस्तै छ । यो कुरा स्विकार गर्न नत प्रचण्डले सकेका छन्, नत माओवादीका नेताहरुले । अर्कोतिर एमालेकै बामदेव गौतम पक्षधर पनि प्रचण्डलाई अध्यक्ष बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
अर्का नेता माधवकुमार नेपालले एकता गर्नका लागि प्रचण्डलाई अध्यक्ष बनाउनुपर्ने आशय व्यक्त गर्दै आएका छन् । यद्यपी प्रचण्डलाई कस्तो भूमिका दिने भन्नेमा बहस एमालेभित्र बहस भने भइरहेको छ ।
एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेल, सचिव योगेश भट्टराई, शंकर पोखरेल र शेरधन राईहरु ओलीलाई अध्यक्ष बनाउनुपर्ने भन्दै जोडदारका साथ लागेका छन् । सकभर अोली-प्रचण्डको सम्बन्ध चिस्याउन उनीहरू लागि परेको जस्तो देखिन्छ । एमालेभित्र प्रचण्डलाई अध्यक्ष बनाएर पार्टी एकता गर्नुपर्छ भन्नेमा खुलेर लागेका बामदेव गौतम र माधब नेपाल मात्रै हुन् ।
पार्टी एकता हुनुपर्छ भन्ने दबाब भने दुर्व दलको सबै नेतालाई छ । भिम रावल, प्रदिप ज्ञवाली र अग्नी खरेलहरु मध्यमार्गी बाटोमा छन््,जो पार्टी एकताका लागि प्रतिवद्ध भएर लाग्नुपर्छ भन्ने मनस्थितीमा देखिन्छन् ।
विहिबार वृहत पत्रकार सम्मेलन गरेका एमाले अध्यक्ष ओलीले पार्टी एकताका लागि गृहकार्य भइरहको त भने तर पदीय भागबण्डाको विषयमा खुलेर बोल्न सकेनन् । पत्रकारको ओलीले पार्टी एकताका लागि कार्यदलले काम गरिरहेको छ भन्दै पन्छिए ।
त्यसैले पदीय भागबण्डा पार्टी एकताको मूल समस्या हो भन्न सकिन्छ । ओली प्रचण्डबीचको सम्बन्ध राम्रो भएर नै एकता हुनुपर्छ भन्ने मनसाय सबैको छ । केही दिन बादल लागेर खुला भएको आकाश जस्तो एमाले–माओवादीबिचको पार्टी एकता कहिले हुने हो अझै भन्न सकिने अवस्था छैन ।
माघ १२ गते, २०७४ - १३:५७ मा प्रकाशित